Redmi K20 wuxuu Snapdragon u isticmaali doonaa processor ahaan | Androidsis
Redmi K20 ma imaan doono Snapdragon 855
Waxaan maqalnay warar xan ah oo ku saabsan Redmi K20 toddobaadyo, dhamaadka-sare sare ee sumadda Shiinaha. Taleefanka ayaa la sii dayn doonaa waqti yar, toddobaadkan waxay noqon doontaa rasmi ah. Waxaan helnay warar badan oo ku saabsan telefoonka, sida kamaradaha gadaasheeda, Qalabka dareeraha seddexlaha ah ayaa lagu dhex isticmaali doonaa ama batteriga taleefanka. Waxaan sidoo kale horey u maqalnay inay lahaan laheyd Snapdragon 855 processor ahaan.
Pero parece que waxaan ka heli laba nooc oo kala duwan, oo aan la mid ahayn sidii aan u maleynay. Sidaa darteed, waxaan helnaa Redmi K20 oo dhex dhexaad ah iyo nooc Pro ah oo noqon doona dhamaadka-sare. Nooca dhexdhexaadka ah sidaas darteed ma isticmaali doono Snapdragon 855.
Xog cusub ayaa nooga tagaysa macluumaad ku saabsan telefoonadan cusub. Redmi K20 wuxuu la imaan lahaa Snapdragon 730 oo ah processor. Laga soo bilaabo wixii aan ka arki karno in taleefanka lagu bilaabay dhex-dhexaadka ugu sarreeya ee ku saabsan Android. Sidaa darteed waxay noqon laheyd taleefanka nooca leh xogtii ugu horreysay ayaa la helay toddobaadyo ka hor.
Noocaan caadiga ah ee taleefanka ayaa la filayaa tag dhawr qodob oo ka mid ah qaabka Pro. Waxaan ku haysan doonnaa kamarad lagalaaban karo, marka lagu daro shaashadda AMOLED. Ma garanayno in taleefankani la iman doono kamarad saddex-jibaar ah nooca Pro, in kasta oo ay noqon karto.
Sidan oo kale, Redmi K20 waxaa lagu bilaabay dhex-dhexaadkan qiimaha ah ka dibna waan haysannaa K20 Pro oo ah dhamaadka sare Snapdragon 855 kuwaas oo aan dhagaysanaynay warar bilo ah. Shaki la'aan, sharad dulsaar ah oo ku saabsan astaanta adoo nooga tagaya laba taleefan, oo aan ugu adeegno dhagaystayaal kala duwan
Talaadada waxaan ka tagi doonaa shaki, maxaa yeelay waxay noqon doontaa markaa marka labadan taleefan ee nooca Shiinaha la soo bandhigo. Markaa waan arki doonaa haddii Redmi K20ani yahay nooc dhexdhexaad ah oo heer dhexe ah ka dibna waxaan heysanaa nooc kale oo ka mid ah meelaha sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K20 ma imaan doono Snapdragon 855
Disney iyo Samsung waxay ku dhawaaqayaan waraaqo cusub oo rasmi ah oo loogu talagalay Galaxy S10
OnePlus 5 iyo 5T ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android Q oo leh qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka cusub ee OnePlus 7